Allgedo.com » 2012 » October » 10
Home » Archive Daily October 10th, 2012
Wiil Afduub layaab leh u geestay Gabar uu Jeclaaday kadib markii Gabdhaasi ka diiday in ..
Waxaa Dhawaan Imaaraadka Carabta ka dhacady Arin aad loola yaabay kadib markii Wiil dhalinyaro ah oo u dhashay Dalkaasi uu afduubtay Gabar ka diiday in uu Shukaansado ama Haasaawe la wadaago. Ninkaan oo da`diisa lagu sheegay 24 sano jira ayaa gabadhaan afduubay kadib markiii uu isku dayay in uu shukaansado taa ay gabadhu ku gacan seertay kana diiday. Gabadhaan oo u dhalatay Dalka Imaaraatka ayaa waxay...
DAAWO SAWIRADA: Madaxweyne Xasan Sh Maxamuud oo lakulmay dhigiisa Uganda
Madaxweynaha dowlada Soomaaliya Xasan Sh Maxamuud ayaa magaaladda Kampala ee dalka Uganda kulan kula yeeshay dhigiisa dalkaas Yuweri Musevani. Kulankan oo ahaa mid xasaasi ah ayaa waxaa ay kaga wada hadleen xariirka labada dal ee Soomaaliya iyo Uganda. Sidoo kale waxaa ay isla soo hadal qaadeen la dagaalanka Kooxda Shabaab oo ay ciidamada Amisom ka wadaan gudaha dalka Soomaalia. Madaxweynaha Uganda...
Shabaab-kii ugu badnaa oo lagu soo qabtay Howlgalo maanta ka dhacay Muqdisho
Ciidamada Dowlada Soomaaliya ayaa maanta Magaaladda Muqdisho ka sameeyya Howlgalkii ugu balaarnaa oo lagu soo qabtay rag katirsan Shabaab. Howlgalkan oo ay si gaar ah usameynayeen ciidamada Nabad sugida ayaa waxaa uu ka dhacay degmooyin katirsan gobolka Banaadir. Taliyaha Booliiska Gobolka Banaadir Col.Maxamed Xasan Maalin oo Saxaafada kula hadlay Saldhiga Degmada Hodan ayaa sheegay in dadka lasoo...